Isiseko esijikeleze ngokupheleleyo esisiseko esincinci esincinci sokudibanisa ubhedu ukuhlangana kwamalungu Usebenzisa inkqubo ye-DW-UHF-10 kW yokungenisa izinto kunye nokufumaneka kwelebhu yokuqhekeza
Umatshini wokufakisha we-DW-UHF-10kw
Amandla: 9.58 kW
I-DW-UHF-10kw Inkqubo yokugqogqa
• Ityhubhu ebhedu-ityhubhu yecontenser
Amandla: 8.83 kW
Ubushushu: Malunga ne-1300 ° F (704 ° C)
Ixesha: i-2 sec
Intlanganiso encinci ye -hubhu (ityhubhu ye-condenser) yaqokelelwa kwaye umsesane osuka kwi-braze alloy (umthengisi wesilivere) wasungulwa kwaye wabekwa kwindawo yokuhlangana yechubhu ezimbini. Ixesha lokushisa lemizuzwana emi-2 lalanele ukuhambisa i-alloy kwaye ugqibe ngokudibanisa.
Njengoko kubonisiwe, inkqubo ye-DW-UHF-10kw ye-induction ye-induction iyakwazi ukufudumeza zombini ityhubhu enkulu kwaye incinci kumacandelo e-tube ukugqiba ukudityaniswa okuhlanganisiweyo. Amaxesha obushushu asebenzisa ikhoyili yovavanyo ekhoyo ngaphakathi kokulindelwa kobushushu bexesha elilindelekileyo elifunwa yiFLDWX
I-HLQ iya kufuna indibano epheleleyo ukuze iphinde ihlolwe ukuze kuphuhliswe okokugqibela ukucwangcisa ukupakisha imikhoyili Unokufumana onke amakhonkco ali-12 abonisiweyo kwifoto yakho yoyilo. Kuyimfuneko ukwazi kwaye ubone ukucaca phakathi kokunxibelelana kwebhobho ukuba ibhalwe kunye necandelo le-compressor yensimbi yokuqinisekisa ukuba izindlu zensimbi azichaphazelwa yintsimi ye-RF edalwe kwi-coil yomthwalo. Olu luyilo lokugqibela lunokufuna ukongezwa kwezixhobo zokufota kumkhoyili oya kuthi zijolise kuwo umhlaba we-RF kwiziko lobhedu hayi kwizindlu zentsimbi.
Iimvavanyo zokuqala zagqitywa kwi-DW-UHF-10 kW isebenzisa ikhoyili yeelebhu. Imveliso yokufudumeza yokumilisa yokufakelwa kwemveliso iya kufakwa kwizindlu ezingekho mxholweni ziya kuvumela umqhubi ukuba ayisebenzise ukufumanisa ikhoyili ecaleni kwesithambiso sobhedu sokwenza indawo yokufudumeza echanekileyo neyakhayo. Uyilo lwekhoyili lokuvelisa luya kubandakanya isikhokelo esifutshane kuneso sovavanyo kwaye siyilungiselelwe ukuze imijikelezo yobushushu iphuculwe (amaxesha amafutshane obushushu).
I-HLQ inokubonelela ngenkqubo ngolawulo lwenkqubo. Oku kuya kuba ngumgaqo nkqubo ohleliweyo ocwangcisiweyo oya kuphuhliswa kwilungu ngalinye elidwelisiweyo kwifoto yendibano ebonelelwe ngesicelo sesicelo esivela kwi-FLDWX. Unxibelelwano ngalunye kwezi ezili-12 luya kwenziwa lucwangciswe ngokulandelelana ukulungiselela ukudityaniswa ngakunye-oku kuya kuvumela umsebenzisi ukuba ahambe ngokulandelelana okufanayo njengoko kulungiselelwe ukudibanisa 1 ukuya kudityaniswa 12. Umjikelo ngamnye we-Uuction briling coil / isibambo uya kususa inkqubo idityanisiwe 1 (ixesha lobushushu kunye ne-% yamandla) yokudibanisa 2 (ixesha lokushisa kunye ne-% amandla) njlnjl njl. ukuba zidibeneyo. Oku kuyakuthatha umsebenzi wokuqikelela uphelelwe lixesha ngokudityaniswa ngakunye ukubonelela ukuphindeka kwinkqubo.
Olunye ukhetho olunokuqwalaselwa lungaqwalasela inketho yeHLQ Robotic Arm. Olu khetho luxhasa i iikhoyili zokubhaka/ indawo yokuhlala kunye neyokulungiselela indibano xa icwangciselwe ukubeka ikholeji kwindawo edibeneyo. Ingalo yenkxaso ijikeleza kwaye ihambisa i-coil / i-coil yezindlu kwindawo efanelekileyo kunye ne-angle nganye edibeneyo yokuqinisekisa indawo yomhlaba kunye nexesha lokushisa.
iindidi Teknoloji tags ubhedu lokugcina ithumbu, umatshini wokubrasha i-tubing brazing, Inkqubo yokufakwa kwebhedu yokutshiza, indawo yokugcina izinto eqinileyo, isantya esiphezulu sobhedu lokugcina ityhubhu, isantya esiphezulu ethengiswa i-tubing yethusi, induction zethusi iibhubhu ukutsha, ukungeniswa kokudityaniswa kobhedu ukudibanisa amalungu, ityhubhu encinci yobhedu Post yokukhangela